Somaliland” hadii Somaliya cunaqabateynta hubka laga qaaday anagane waa in lanaga qaadaa” |
Maamulka Somaliland ayaa wali waxa ay ku riyoonayaan waxyaaba dunida mar hore kasoo xirmay oo ahaa madax banaani ay ka helaan Soomaaliya inteeda kale iyada oo dowlada Ingiriiska oo markii horaba gadala kataagnaa jirtay ay ugu baaqday in ay Soomaalida wax laqabsadaan.
Wasiirka gaashaandhigga maamulka Somaliland ee uu hogaamiyo Siilaanyo ayaa waxa uu maanta ka hadlay qaadista cunaqabateynta Soomaaliya, isaga oo golaha amaanka ka codsaday in Somaliland iyana cunaqabateynta hubka laga qaado isaga oo arintaas ku maldahayo in Somaliland aysan Soomaaliya kamid aheyn.
Waxa uu yiri wasiirku, “Somaliland iyo Soomaaliya waa laba wadan. Hadii Soomaaliya hub loo ogolaaday Somaliland iyana waa in sidoo kale loo sameeyo”.
Hadalka wasiirka Gaashaandhigga maamulka Hargeysa ayaa waxaa wax lala yaabo iyo Riya maalmeed ku tilmaamay indheer garadka Soomaalida kuwaas oo warbaahinta ka maqlay kafal celintiisa qaadista xayiraada hubka Soomaaliya.
Maamulka Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku dhawaaqeen bilaawgii sagaashameeyadii in ay ka go’een Soomaaliya inteeda kale hasa yeeshee majirin dowlad qura oo aqoonsi siisay, waxaana rabitaankooda liin ku dhiijisay beesha caalamka markii ay ku dhawaqday in ay aqoonsantahay Soomaali mid ah oo hal madaxweyne leh, waxaana Somaliland lagu marti qaaday kulan ka dhihi doona Ingiriiska oo madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud uu shir gudoominayo.